Darpan Nepal – सोनिका रोकायाले रुँदै रुँदै किन छोडिन देश ? यस्तो रहेछ कारण (भिडियो सहित)
सोनिका रोकायाले रुँदै रुँदै किन छोडिन देश ? यस्तो रहेछ कारण (भिडियो सहित)
Oct 12, 2018adminSocial0Like
काठमाडौं।बझाङबाट धनगढी बसाई झर्दैगर्दा होटलमा टिभी देखेर अच्चममा परेकी सोनिका रोकायाले त्यहीबेला कुनै दिन टिभीमा देखिने सपना पालेकी थिईन । बाल्यकालको त्यही सपना पूरा गर्न सोनिका ग्ल्यामर क्षेत्रमा आबद्द रहदै आएकी थिईन । बूढानीलण्ठ स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेकी सोनिकाको परिवारको इच्छा डाक्टर, इन्जिनियर बनाउनमै थियो ।
यद्यपि, परिवारको इच्छा विपरीत नै विज्ञान विषयको अध्ययन छाडेर पत्रकारितामा प्लस टु गरेकी सोनिकाको रहर नेपाली चलचित्रमा नै स्थापित बन्ने थियो । तर एकाएक उनी नेपाल छाडेर विदेश जाने भएकी छन, भिषा र टिकट तयार रहेको बताऊछिन उनी । आखिर किन गरिन त नेपाल छाड्ने निर्णय ? कुन देश जाने भईन त उनी ? हेर्नुस् भिडियो ।
नायिका रेखा थापाको क्रेजी फ्यान सोनिका साथीभाइले ‘तिमी त रेखाजस्तै देखिन्छौँ’ भनेर फुर्काउने क्रममै नायिका बन्ने रहर बढेसँगै उनले छोटै अवधिमा निकै चर्चित बन्न सफल भईन । वाउ नेपाल च्यानलमा झण्डै डेढ बर्ष आबद्द रहेकी उनी जति चर्चित भईन उति नै आलोचित पनि भएको बताऊछिन उनी ।
Previous Postमलेसियामा छायांकनरत "तिम्रो मनको" भिडियो रिलिज, पदम र कल्पना एक अर्कामा दुबे यसरी Next Postचङ्गाचेट’को ‘गोजीमा दाम छैन’ लाई करोड बढी दर्शक